Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.4.1 မဲရေတွက်မှုအရာ
ဒါကြောင့်ခေတ်မီအသံဘာသာစကားမှာ၎င်းပေမဲ့, လူမှုရေးသုတေသန၏စာရေးမယ့်မယ့်အမှုအရာရေတွက်သည်။ ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏အသက်အရွယ်ခုနှစ်, သုတေသီများအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးရေတွက်နိုင်ပေမယ့်အလိုအလြောကျသုတေသနလုပ်ငန်း ပို. ပို. ပစ္စည်းပစ္စယရေတွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ အမှုအရာရေတွက်ရကျိုးနပ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ: ငါတို့သည်ကြီးမားတဲ့ဒေတာနှင့်အတူကောင်းသောသုတသေနပွုသွားလျှင်အဲဒီအစား, ငါတို့သည်မေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါသလား ဒါကတစ်ဦးလုံးဝပုဂ္ဂလဒိဋ္ကိစ္စနှင့်တူပုံပေါ်နိုင်ပေမယ့်အချို့ယေဘုယျပုံစံများရှိပါတယ်။
ငါအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်တို့ရှေ့မှာရေတွက်ခဲ့သည်တစ်ခုခုရေတွက်သွားတာပါ: မကြာခဏဆိုသလိုကျောင်းသားများကိုဟုသူတို့၏ရေတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းကိုလှုံ့ဆျော။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျောင်းသားတစ်ဦးဟုပြောစေခြင်းငှါ, များစွာသောလူရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးလူအတော်များများအမွှာလေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်ဘယ်သူမှရွှေ့ပြောင်းအမွှာလေ့လာခဲ့သည်။ မရှိခြင်းအားဖြင့်လှုံ့ဆျောမှုများသောအားဖြင့်ကောင်းသောသုတေသနဦးဆောင်လမ်းပြမပေးပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, ရှိရွှေ့ပြောင်းအမွှာလေ့လာဖို့ကောင်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယခုသူတို့လေ့လာသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ကျွန်မရဲ့ရုံးထဲမှာကော်ဇောပေါ်ချည်၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလိုအလျှောက်ဒီကောင်းတစ်ဦးသုတေသနစီမံကိန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မရှိခြင်းအားဖြင့်လှုံ့ဆျောမှုမျိုးဟုဆိုသကဲ့သို့ဖြစ်၏: ကြည့်ရှုအရပ်၌ကျော်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖွင့်, ငါကတက်ဖြည့်စွက်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်သွားတာပါ။ သို့သော်မတိုင်းအပေါက်ကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဲဒီအစားမရှိခြင်းအားဖြင့်လှုံ့ဆော်၏, ငါသုတေသနစိတ်ဝင်စားစရာသို့မဟုတ်အရေးကြီးသော (သို့မဟုတ်ထွက်ရှိသောနှစ်ဦးစလုံး) အခါရေတွက်နှစ်ခုအခြေအနေများတွင်ကောင်းသောသုတေသနကိုဦးဆောင်သည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ကမူဝါဒကိုဆုံးဖြတ်ချက်များမောင်းသောစီးပွားရေး၏ညွှန်ပြချက်အတွက်သောကွောငျ့ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်အရေးကြီးပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လူတွေဟာအရေးကြီးသောအရာကိုတစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောသဘောရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်း၏ကျန်၌ငါသည်ရေတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အဘယ်မှာရှိသုံးခုကိုဥပမာပေးမယ့်တာပါ။ အသီးအသီးအမှု၌, သုတေသီမဟုတ်ဘဲသူတို့ဘယ်လိုလူမှုရေးစနစ်များကိုအလုပ်အကြောင်းပိုမိုယေဘုယျစိတ်ကူးများသို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထင်ရှားအလွန်အထူးသဖြင့် setting တွင်ရေတွက်ခဲ့ကြ, haphazardly ရေတွက်မခံခဲ့ရပါ။ တစ်နည်းအားဤအထူးသဖြင့်ရေတွက်လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ဝင်စားစရာအဘယ်အရာကိုအများကြီးကိုဒေတာသူ့ဟာသူထဲမှာမပါ, ဒီကပိုယေဘုယျအတွေးအခေါ်များကနေလာပါတယ်။
အောက်တွင်ငါဥပမာသုံးခုအပေါ်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်: New York မှာတက္ကစီယာဉ်မောင်း၏ 1) ပြုပြင်အပြုအမူ (ပုဒ်မ 2.4.1.1), ကျောင်းသားများအားဖြင့် 2) ချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်း (ပုဒ်မ 2.4.1.2) နှင့်တရုတ်အစိုးရ၏ 3) လူမှုရေးမီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအပြုအမူ (ပုဒ်မ 2.4.1.3) ။ အဘယျသို့ဤဥပမာမျှဝေသူတို့အားလုံးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုရေတွက်သီအိုရီဟောကိန်းများကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကွောငျးဖျောပွသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များ (နယူးယောက်မီတာတက္ကစီ၏အမှု၌ကဲ့သို့) အတော်လေးတိုက်ရိုက်ဒီရေတွက်ပြုပါရန်သင့်အား enable ။ အခြားကိစ္စများတွင်သုတေသီများအတူတူဒေတာပေါင်းစည်းနှင့် (ချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့စည်းခြင်း၏အမှု၌ကဲ့သို့) စစ်ဆင်ရေးသီအိုရီ Construction အားဖြင့်မပြည့်စုံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်သုတေသီများ (ဆိုရှယ်မီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု၏အမှု၌ကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်းဒေတာစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီဥပမာကိုပြသမယ်လို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းများမေးနိုင်နေသောသုတေသီများအဘို့, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအကြီးအဂတိတော်ကိုရရှိထားပါသည်။